Ipaki yemazuva ano, mabhenji emaguta uye ebindu kubva kuCHEMA MUFANANIDZO
Mapaki ebhenji ndicho chinhu chisingarambwe idiki yemaguta ekuvakwa. Kubva pane iwo maonero ekuona kwekushandiswa kwezvekushandisa, ivo vanoshandiswa kuve vakagara, asi vachifunga nezve nzvimbo kuronga, ivo ndevemidziyo yemudhorobha. Mapaki, matangi, gadheni, migwagwa uye nzvimbo dzemaguta dzinopihwa mabhenji.
Mune imwe pfungwa yakajeka, mabhenji ndiwo anonyanya kushandiswa chinhu chidiki chekuvaka kwete mumapaki neminda. Tinokwanisawo kuwana mabhenji munhandare, pamberi pamatanho emitambo, kumitambo yechikoro, mumachechi, kumakuva uye mune dzimwe nzvimbo zhinji.
Mabhenji eguta inzira yemakumbo aneta nekufamba kwakawanda, pamwe nemukana wekumira kwechinguvana, ichi chinogona kuve chiitiko chekureurura kwerudo. Asingatauri nhetembo, mabhenji emaguta anongova iwo akakosha gadheni uye paki fenicha, pasina izvo zvinonetsa kufungidzira zvakapoteredzwa zvemitambo yekutamba, mukatikati mebindu reguta, nharaunda yepadhiri rekuseri kana chero imwe nzvimbo yeruzhinji.
Isu tinoshandisa mabhenji epaki nekugara muzuva mubindu remaruva, tichinakidzwa nekukurukurirana neshamwari mupaki, kuverenga bhuku padamu kana kuona mwana achifara nekunakidzwa kwenzvimbo yekutamba. Dai zvisiri zvemabhenji epaki, nzvimbo yemuguta ingadai iri yehupfumi uye isinganyanyi kushanda.
City park mabhenji
Kune akawanda marudzi emabhenji emaguta. Mhando dzadzo dzinogona kusiyaniswa nekuda kwavari kuenda, kuvaka, zvigadzirwa zvinoshandiswa pakuvaka kwavo, pamwe nesitayera uye dhizaini.
Nekuda kwegadziriro kana chinangwa, tinokwanisa kusiyanisa mabhenji emumigwagwa, inowanzoidzwa mabhenji emaguta, mabhenji epaki uye mabhenji ebindu.
Nekuda kwekuvakwa, iko iko, chimiro, chinomira kunze mabhenji asina backrest kana mabhenji ane backrest. Mabhenji akamira pamakumbo mana kana anopfuura, uye zvakare akabatana zvachose kune pasi nehupenyu hwayo hwese.
Nekuda kwemhando yekuvaka uye yekupedzisa, mabhenji epaki akapatsanurwa akanda mabhenji esimbi, mabhenji esimbi - mabhenji akagadzirwa nesimbi mabara, mabhenji ekongiri, mabhenji kubva kukongiri yakasimbiswa kongiri, mabhenji ematombo kana mabhenji epurasitiki.
Nekuda kwechimiro uye dhizaini, tinokwanisa kusiyanisa gumi nemaviri emhando dzakasiyana dzemabhenji epaki. Kuputsa kuri nyore kunosanganisira mabhenji emazuva ano uye mabhenji echinyakare, kazhinji anowanzotarwa pane chimiro chenguva yakapihwa kana kuchinjiridzwa kune zvivakwa zvakapendana nezvimwe zvinhu idiki yemaguta ekuvakwa.
Akanakisa park mabhenji
Chii chekufunga kana uchisarudza paki bhenji? Pane akawanda maitiro. Pazasi isu tinopa iwo akakosha kwazvo.
Yakachipa park mabhenji? Mutengo
Sezvinoita nemhando ipi neipi yekutenga kana yekudyara, mutengo wechigadzirwa unogara uri imwe yemasarudzo maitiro. Mune ino kesi, mutengo wemapaki mabhenji zvinoenderana zvakanyanya pane zvigadzirwa zvebhenji uye zviyero zvacho. Mapaki epaki ebhenji anowanzo kazhinji esimbi ebhenji zvivakwa. Izvo zvidiki zvidiki zvichave zvakachipa. Iyo yakakura bhenji, iyo yakawanda midziyo inoshandiswa kuigadzira, saka mutengo unowedzerawo.
Mabhenji eguta akachengeteka
Kupfuura zvese, bhenji rinofanira kunge rakachengetedzeka kune vakuru nevana. Chimiro chayo chinofanirwa kuve chakavimbika uye chakasimba kuti kuchengetedzwa kwekushandisa iyi fenicha yemumugwagwa kusaderera nekushandiswa kwayo.
Kunyangwe pasina mutemo wepamutemo wePoland ungashanda zvakananga kumabhenji epaki, pane izvo zvakafanana zvinodiwa izvo zvinofanirwa kushandiswa pakugadzira nekugadzira mabhenji epaki. Iyo PN-EN 1176 chiyero chezvivakwa zvemitambo yekutamba chinonyanya kushandiswa.
Kugadzikana kwemapaki mabhenji
Midziyo inosiiwa munzvimbo dzinowanikwa veruzhinji inooneswa nekuparadza. Naizvozvo, mabhenji epaki anowanzove ne-anti-vandal system. Iko kuwedzerwa kwebhenji rakacherwa muvhu, iro rinotadzisa bhenji kuti risafambiswa, rabiwa kana chero imwe nzira yekuparadza.
Bhenji negwara remarara
Kazhinji chinhu chisingaenzaniswi chemapaki mabhenji ibheji marita. Iyo inogona kuve yakabatanidzwa nebhenji sechinhu chayo. Iyo inogona kuve chinhu chakaparadzaniswa chediki yekuvakisa, asi ipapo inofanira kusarudzwa zvine hungwaru uye inoenderana nekuenderana kwebhenji.
Mapaki mabhenji anokwanisa zvakare kuve nematafura, mareti uye nezvimwe zvinhu zvakawanda. Vanopa nzvimbo yemachira, chikwama kana chikwama. Vanokutendera kuti udzore bhuku racho zvakanaka, isa zvimwe zvinhu kana kudya chikafu mumamiriro akafanana neaya ari muresitorendi. Mumapaki, mabhenji pane dzimwe nguva anoperekedzwa nematafura inzvimbo yekutamba chess, cheki kana mimwe mitambo. Mabhenji anogona kuve nemagetsi akabatanidzwa muchimiro chemwenje. Vanogona kuva chikamu chemahara, chitubu, chifananidzo kana mubhedha wemaruva. Nhasi chete kungofungidzira kunogumisa mugadziri!
Yakanda iron mabhenji mabhenji
Iko kubatana kwebhabhoni uye iron isimbi inokandwa simbi. Iyo inoonekwa sechinhu chakasimba kwazvo kuvaka zvinhu zvinoshandiswa mukugadzira mabhenji emaguta. Cast iron racks inogona kutora akawanda mafomu uye maumbirwo. Ivo vane akachekwa ekushongedza uye asina kujairika magumbo mafirita. Aya mabhenji akagadzirirwa anoshanda chero kupi, nekuti unogona kusununguka kugadzira kutaridzika kwavo. Iyo yakakandwa yesimbi bhenji chikamu chemadhorobha fenicha iyo ichashanda zvakanaka mupaki, gadheni uye mraba.
Cast mabhenji epaki mabhenji, mushure mekugadzira chimiro, ari hupfu hwakakoshwa, nekuda kweiyo furemu yacho inofadza kubata, uye nzvimbo yayo inotsvedza uye inopesana nekuora.
Mumwe mukana weakakandwa esimbi park mabhenji ndiko kurema kwavo. Mabhenji akadai epaki anorema kwazvo zvekuti anoramba akasimba kunyange pasina chikonzero chekuzvisimbisa muvhu. Vana vanosvetukira pamashure havasi kuzopaza nyore nyore chimiro chakakura kudaro, uye kunyange vandals vangaramba kuita zvakaipa zvakaipa.
Wooden park mabhenji
Mabhenji akagadzirwa zvachose ehuni anotaridzika chaizvo. Ichi chechisimba kuvaka block anovapa hunhu uye hunhu. Nehurombo, sezvazvakaita nehuni, zvinoda kuchengetedzwa kwenguva nenguva. Ivo vanofanirwa kupendwa nekuvandudzwa nguva zhinji. Chengetedza kuchengetedzwa kubva pamamiriro ekunze asina kunaka.
Mabhenji emapaki ehuni haafanire kuiswa zvakananga pasi, jecha kana huswa. Havafanirwe kusangana zvachose uye kana ine mvura yakawanda pasi. Iwo akanakira nzvimbo dzakapetwa dzimba uye dziya neine yakaoma uye yakanaya pasi.
Metal park mabhenji
Universal, mabhenji emaguta emazuva ano? Kana kuti pamwe bhenji rebindu rakazvimirira? Pane terari? Meten mabhenji anouya kuzonunura. Mafuta akasiyana-siyana alloys anoshandiswa kune avo mafirita, kazhinji inogara yakasimba, yakasimba uye yakapepuka. Muenzaniso werudzi urwu rwezvivakwa zvekuvaka ialuminium.
Metal mabhenji ane dhizaini yemazuva ano. Imwe yemabhenefiti avo ndiko kurema kwavo. Mabhenji akadaro akanyanya nyore kutama kubva pane imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Vanogona kushanda nemwenje sechigaro chevanoona zvekuita kwekunze kana chidimbu chebindu icho chinoshandura chinzvimbo chayo kazhinji, s.k. zvinoenderana nemwaka.
Konkrete uye mabwe park park
Ipaki kana bhenji reguta harifanirwe kuve nemapuranga, echinyakare kumashure uye makumbo. Iyo inogona kuve kongiri yakakandirwa, yakasununguka yakasununguka kana yakavezwa mudombo. Mhando idzi dzemabhenji dzinorema, hazvidi kuchengetedzwa uye dzinenge dzisingapere. Zvinogona kuva chikamu chematanho, chitubu kana mubhedha wemaruva. Ivo vanobatana zvakakwana pamwe nezvimwe zvinhu zvidiki zvekuvakisa.
Mhinduro dzakakurumbira dzinosanganisira kusanganisa zvinhu zvakawanda. Bhenji rine backwood yemapuranga uye chigaro chinogona kuve nemakumbo akakurisa eekongiri. Izvo zvese zvinoenderana netarisiro yemushambadzi uye fungidziro yemugadziri.
4.9 / 5 ( 31 mavhoti )
bhenji rebindumabhenji ekongirimabhenji emapurangaMabhenji emugutaBhenji mabhenjiMapaki ebhenjikongiri yepaki mabhenjipark mabhenji pasina backrestmutengo wepaki mabhenjipark mabhenji mutengo rondedzeromabhenji epaki yemapurangasimbi park mabhenjimabhenji emapaki egutamabhenji emazuva ano epakikugadzira paki mabhenjicast iron park mabhenjimabhenji esimbiKanda mabhenji esimbimabhenji emapaki egutamabhenji emazuva ano epakimabhenji anodhuracheap park mabhenji